Scenario Marketing avy any amin'ny helo - Fitarihan-tànana marobe, saingy tsy misy varotra | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 12, 2016 Jamil Velji
Na dia fananana loharano fitarihana marimaritra iraisana aza dia zavatra lehibe amin'ny orinasam-pivarotana rehetra, tsy hitondra sakafo amin'ny lovia io. Ho sambatra kokoa ianao raha mifanaraka amin'ny tatitra Google Analytics manaitra anao ny valin'ny varotrao. Amin'ity tranga ity, farafaharatsiny ny ampahany amin'ireo fitarihana ireo dia tokony havadika ho varotra sy mpanjifa. Ahoana raha mahazo fitarihana taonina ianao, nefa tsy misy varotra? Inona no tsy mety ataonao, ary inona no azonao atao mba hitarika anao hiverina any amin'ny làlany tsara ny fantsom-pivarotanao?
Raha manontany tena ianao amin'ny toe-javatra toy izany, ny dingana voalohany tokony hataonao dia ny mijery tsara ny tranonkalanao sy ny fampielezana marketing. Azo atao izany fa ny iray amin'izy roa dia tsy mahavita mamadika ny mpitsidika anao ho mpividy. Voadinika tsara ve ny fampielezan-kevitrao? Ary ny tranokalanao? Andeha hojerentsika ireo scenario roa;
Scenario 1: Fanentanana iray tsy tantin'ny olona
Raha te hahalala raha mety ny fanentanana ataonao amin'ny marketing dia mety manomboka amin'ny fandinihana azy tsara ianao. Raha manao fampielezan-kevitra amin'ny Google Ads ianao dia diniho ny fandinihana tsara ny tatitra momba ny fangatahana fikarohanao. Tsy mila fahalalana manam-pahaizana ianao handinihana an'io. Ho hitanao ireo teny ao amin'ny doka ampiasain'ny mpitsidika hahita ny tranokalanao. Misy ifandraisany amin'ny zavatra amidinao ve izany?
Amin'ny ankapobeny, ny mpividy dia tsindrio ny teny fikarohana ao anaty doka mifanaraka amin'izay tadiaviny. Amin'ity tranga ity, raha mivarotra "kitapo hoditra vehivavy ianao" dia ampiasao ny teny fikarohana sy ny fiovaovan'ny SEO izay miavaka amin'ny vokatrao. Teny iray ao amin'ny doka misy anao toa ny "kitapo hoditra" na "kitapo vehivavy" dia malalaka loatra ary somary mamitaka. Raha vantany vao hitanao ny teny lakile mety amin'ny dokao dia ampidiro ao amin'ny URL fampisehoana anao isaky ny doka, ny lohatenin'ny fampielezan-kevitra ary amin'ny famaritana. Ny valin'ny fikarohana dia sahy manome ny teny lakile mba hahitana azy bebe kokoa.
Ny lafiny iray hafa amin'ny fampielezan-kevitra izay mety hiteraka tsy fahitana fiovam-po dia ny karazana vokatra, ny kalitaon'ny tolotra ary ny vidiny omenao. Raha hanao fampielezan-kevitra ho an'ny vokatrao na serivisinao ianao, farafaharatsiny ataovy ny fikarohana ataonao mba hahalalanao ny zavatra ilain'ny mpanjifanao sy izay atolotry ny fifaninanana anananao. Hamarino tsara fa ny vokatrao dia manana teboka matanjaka izay asehonao mazava tsara amin'ny tolotrao. Avelao ihany koa ny vidin'ny fifaninanana arakaraka izay ananan'ny tsena.
Scenario 2: tranokala tsy mahomby
Raha vantany vao nolavinao ny anton'ny fampielezan-kevitra na namboarinao ny olana dia ny tranokala no tompon'antoka manaraka. Angamba mahaliana ny tranokalanao. Na izany aza, manao ahoana ny fahombiazan'ny pejy fandraisana? Ary ny famolavolana azy, mety ve ny mpampiasa? Indraindray, mety mila mieritreritra toy ny mpanjifa ianao ary manadihady ireto lafiny manaraka amin'ny tranokalanao ireto amin'ny fomba fijerin'izy ireo.
Design - Raha manatri-maso fifamoivoizana be ianao izay tsy mitarika fiovam-po dia mety hisy olona hidina ao amin'ny tranonkalanao ary hahazo fahatairana amin'ny kolontsaina. Handeha tokoa izy ireo! Manontania tena raha toa ka mifanaraka amin'ny fironana ankehitriny eo amin'ny sehatry ny indostria ny volanao tranonkala. Ankehitriny, mitombo haingana ny teknolojia, ary lasa zatra ny zavatra faran'izay kanto ny olona. Amin'ity tranga ity, ny fananana tranokala mahatsikaiky izay tsy sariaka amin'ny finday ihany koa dia tapaka. Avelao ny volavolanao hanome ny fahatsapana marina ny orinasanao ary hijanona mandritra ny fotoana maharitra ny mpanjifanao.
Contact Details - Ho an'ny mpanjifa, ny fisian'ny antsipirian'ny fifandraisana mazava dia famantarana fa ny tranokala na orinasa dia tena izy ary azo itokisana. Izany dia ilaina ny mampiditra izany amin'ny endrika amam-bikao. Hamarino tsara fa voahaja ny laharan-telefaonanao sy ny mailaka omenao. Amin'izany fomba izany, raha mifandray ny mpanjifa dia afaka mahazo valiny ao anatin'ny fotoana mety ianao. Tokony ampidiro ao koa ny adiresy ara-batana amin'ny orinasanao.
Pejy manjavozavo - Ity no pejy voalohany izay ho tonga ny mpitsidika anao raha vantany vao manindry ny doka nataonao izy ireo. Amin'ity tranga ity, alao antoka fa misy ifandraisany amin'ny dokambarotrao. Raha tsy hitany izay antenainy, ny vintana dia ny handaozany ilay pejy fotsiny. Ohatra, raha "fitaovana automatique mailaka" ny teny lakileo, avelao ireo teny ireo hitarika pejy iray izay manome antsipiriany momba an'io fitaovana io. Hamarino tsara fa mora foana ny mampiditra ny pejin-tranonao ary afaka mandeha izy.
Fikarohana - Mora tokoa ny fivezivezan'ny mpanjifa amin'ireo pejy samihafa ao amin'ny tranonkalanao. Mpanjifa maro no mandao pejy iray avy hatrany raha mahatsikaritra fa mandany fotoana be amin'ny fikarohana ny zavatra tadiaviny izy ireo. Amin'ity tranga ity dia amboary ny tranokalanao mba hisokatra mora foana ny pejy rehetra. Ary koa, ireo pejy manan-danja toy ireo mampiseho vokatra sy serivisy, momba ny orinasa, ny fifandraisana ary ny maro hafa dia tokony ho hita sy mora azo.
Miantsoa hanao fihetsika - Ny Call to Action no vavahady mankamin'ny fifampiraharahana lavitra mety hanananao amin'ny mpanjifa ho avy anao. Izany dia mahatonga azy io ho zava-dehibe ny fananganana CTA mazava sy ny bokotra malaza mba hitovizany. Avelao ireo rohy omena anao hitarika ny hetsika manaraka tianao hataon'ny mpanjifanao.
Raha te hanatsara ny resadresakao ianao, tantano koa ny lazan'ny orinasanao amin'ny Internet. Izany dia satria mety hamaky hevitra ny mpanjifa na hampitaha ny serivisinao sy ny vokatrao amin'ny hafa. Noho io antony io dia manolora serivisy stellar foana fa asaivo mamela hevitra sy fijoroana vavolombelona koa ny mpanjifanao. Ireo rehetra ireo dia manampy ny orinasanao an-tserasera hiseho ho mendri-pitokisana ary hanatsara ny CTR anao.
Tags: FNTmampihiditramampihiditra barotrapejy pejyLeadsfitarihana mahayweb design
Jamil no CEO an'ny Varotra mora mandeha mora, masoivohon'ny fivarotana varotra. Ny fahaizany amin'ny marketing, ny hacking amin'ny fitomboana, ny firaka mitarika ary ny varotra ary ny automatisation marketing dia voadika amin'ny fomba mahomby sy azo ampiasaina amin'ny fitondrana ny varotra eny an-tampon-trano! Jamil dia manana traikefa 9+ taona amin'ny maha-mpitarika marketing amin'ny fitomboana avo lenta eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny mpanjifany sy ny tantaran'ny fitomboany dia nasongadina tao amin'ny Forbes, BBC, Tech Crunch ary Venture Beat.
Inona no atao hoe Webrooming? Inona no tsy itovizany amin'ny Showrooming?
Dec 27, 2016 amin'ny 10: 50 AM
Lahatsoratra tsara indrindra Jamil, manasa olona maro hieritreritra.
Fiarahabana avy any Alicante, Espaina.
Janoary 18, 2017 amin'ny 8:23 PM
Ny ankamaroan'ny fotoana, ny mpanjifa dia mitady voalohany ny hevitra momba ny orinasa na ny tamberin'ny mpanjifa hafa alohan'ny hanohizany ny fijery na ny fahalianany hijery ireo pejy samihafa amin'ny tranokalanao. Zava-dehibe ny mitantana sy manatsara tsindraindray ny votoaty, ary ny fisehoana ary indrindra indrindra ny resaka sy ny fifandraisanao amin'ireo mpanjifa tsirairay avy. Ny fampielezan-kevitra sy ny fitarihana dia tsy hoheverina ho mamokatra raha toa ka manao hetsika fotsiny ianao, saingy tsy manana fiverenana ara-barotra mifanaraka amin'izany, noho izany dia zava-dehibe ny mitantana sy manana azy roa ireo.